Crochet शीर्ष, एक गर्मी प्रवृत्ति | बेजिया
मारिया vazquez | 12/05/2022 18:00 | मैले के लगाउने?, प्रचलनहरू
को crochet शीर्ष तिनीहरू गर्मीको दृष्टिकोण घोषणा गर्न हरेक वर्ष फेसन संग्रहहरूमा फर्कन्छन्। तिनीहरूले यसलाई वर्षको आधारमा कम वा कम प्रख्यातताका साथ गर्छन्, र प्रचलनहरूमा अनुकूलन गर्न विभिन्न सूक्ष्मताहरूसँग। यस सिजन, उदाहरणका लागि, त्यहाँ तीन प्रवृतिहरू छन् जुन बाँकीबाट अलग छन्।
को वसन्त-गर्मी 2022 संग्रह Zara, Sfera वा नि: शुल्क मानिसहरूले हामीलाई प्रस्ताव गर्छन्, मुख्यतया, प्राकृतिक टोनमा crochet शीर्ष। तर यी सबै भन्दा बाहिर खडा हुनेहरू होइनन्, बरु फूल मोटिफहरू र क्रोसेट अन्य कपडाहरूसँग जोडिएको बहुरंगी डिजाइनहरू हुन्।
1 सेतो माथि वा प्राकृतिक टोनमा
2 रंगीन आकृतिहरु संग शीर्ष
3 crochet शरीर संग ब्लाउज
सेतो माथि वा प्राकृतिक टोनमा
हालको संग्रहहरूमा प्राकृतिक रंगहरूमा शीर्षहरू सबैभन्दा लोकप्रिय छन्। विशेष गरी ती अफ-सेतो वा ढुङ्गा टोनमा, धेरै बहुमुखी र संयोजन गर्न सजिलो। यी सामान्यतया तिनीहरूको ढाँचा द्वारा विशेषता छन्, सीधा संग बाक्लो पट्टा र गोल गर्दन, Zara को कभर डिजाइन जस्तै। यद्यपि यो फर्म फ्रि पिपलबाट जस्तै छोटो बाहुला र सुन्दर कलरहरूसँग कार्डिगनहरू फेला पार्न सम्भव छ।
रंगीन आकृतिहरु संग शीर्ष
थप हर्षित डिजाइनहरू खोज्दै हुनुहुन्छ? रंगमा वा रङ मोटिफहरूसँग डिजाइनहरूमा शर्त गर्नुहोस्। तपाईंले यस सिजनमा हरियो, पहेँलो र गुलाबी जस्ता उज्यालो रङहरूमा क्रसट टप्स पाउनुहुनेछ। र यी सँगसँगै, अन्य थप बोहेमियन डिजाइनहरू बहुरंगी फूल आकृतिहरू.
crochet शरीर संग ब्लाउज
हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ कि हामी आज कुरा गरिरहेका प्रस्तावहरू मध्ये, यो वसन्तको लागि हाम्रो मनपर्ने हो। र यो हो कि यी ब्लाउजहरू समावेश छन् crochet निकाय वा अगाडि प्यानल तिनीहरूले हामीलाई जितेका छन्। तिनीहरूले बोहेमियन (क्रोचेट) र रोमान्टिक (पफ्ड आस्तीन, रफलहरू ...) बीचको पूर्ण सन्तुलन राख्छन्।
तपाईंले सेतोमा यस प्रकारका धेरै प्रस्तावहरू फेला पार्नुहुनेछ र अरूसँग पुष्प आकृतिहरू समावेश गर्नुहोस्। के तपाईलाई सेतो र नीलो फूल र छोटो पफ आस्तीन भएको क्रोसेट शीर्ष मनपर्छ? यो जारा डिजाइन हो।
के तपाईलाई क्रोसेट माथि मन पर्छ? के तपाइँ तपाइँको कोठरी मा कुनै छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » Crochet शीर्ष, गर्मी मा एक प्रवृत्ति
कट-आउट कट यस गर्मीमा पुनरागमन गर्दैछ